Myanmar: Translations in Myanmar Language | Asian Development Bank
Myanmar: Translations in Myanmar Language
Translations in Myanmar Language
31 Dec 2020 | Project Document
Mandalay Urban Services Improvement Project: Corrective Action Plan
Environment and social compliance audit reports describe project compliance with environmental and social safeguards requirements and include information on consultations and participation of affected people, as well as conclusions and recommendations. This document dated ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020 is provided for the ADB project 47127-002 in Myanmar.
11 Dec 2020 | News Release
အဖွဲ့၀င်နိုင်ငံများ ကိုဗစ်နိုင်တင်းကာကွယ်ဆေး ရရှိဖြန့်ဝေရေး ကူညီရန် အေဒီဘီ၏ ဒေါ်လာ ၉ ဘီလျံအစီအမံ
ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ထိရောက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ကိုဗစ်နိုင်တင်း) ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရာတွင် လျှင်မြန်ညီမျှစွာထောက်ပံ့မှု ပေးရေးအတွက် ဒေါ်လာ ၉ ဘီလျံရှိ ကာကွယ်ဆေးပဏာမခြေလှမ်း Asia Pacific...
05 Dec 2020 | News Release
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု ချဲ့ထွင်ရေးအတွက် အေဒီဘီက ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၁၇၁ သန်း ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံက အလတ်စားဓာတ်အားခွဲရုံ ၄၄ ရုံတည်ဆောက်ရန်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးအရှေ့ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကို ဖြတ်သန်းပြီး ၁,၀၀၆ ကီလိုမီတာရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများ တည်ဆောက်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်...
12 Nov 2020 | Institutional Document
29 Oct 2020 | News Release
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲအမြန်လမ်းသစ်အတွက် အေဒီဘီက ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၄၈၄ သန်း ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ မြို့တော်နှင့် မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်မည့် ၆၄ ကီလိုမီတာရှည် အမြန်လမ်း တည်ဆောက်ရန် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) က ချေးငွေ ဒေါ်လာ ၄၈၃ ဒသမ ၈ သန်းကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ (GMS)...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွာဟမှုကို ချုံ့ပစ်ရန်နှင့် ကိုဗစ်နိုင်တင်းကြား တန်းတူ တိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကို အေဒီဘီတိုက်တွန်း
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအနေဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးချဲ့ရန်နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (ကိုဗစ်နိုင်တင်း) ကပ်ရောဂါမှ စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်နှင့်အမျှ နည်းပညာများကို မျှမျှတတလက်လှမ်းမီစေရေး...
09 Oct 2020 | News Release
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်နိုင်တင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု တိုးချဲ့ရန် အေဒီဘီက ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (ကိုဗစ်နိုင်တင်း) ကပ်ရောဂါအား တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကို အားဖြည့်ရန်အတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ)က ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၃၀ အတည်ပြုလိုက်သည်။ အထူးသဖြင့် လူနည်းစုများနေထိုင်သော်လည်း ...
30 Sep 2020 | News Release
ရန်ကုန်ရေဖြန့်ဖြူးရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အေဒီဘီက ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၁၈၀ ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့သို့ တနေ့လျှင် ရေလီတာ ၈၁၈ သန်း ပို့ဆောင်မည့် ၃၄ ကီလိုမီတာရှိ ရေပေးပို့စနစ်တည်ဆောက်ရန် ချေးငွေဒေါ်လာသန်း ၁၈၀ ကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ)က အတည်ပြုလိုက်သည်။
15 Sep 2020 | News Release
ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း လျော့ဆင်းမည်
ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှဒေသနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းများမှာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ပထမဆုံးနှစ်အဖြစ် ကျုံလှီလျော့ဆင်းမည်ဖြစ်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ကိုဗစ်နိုင်တင်း) ဖြစ်ပွားမှု အကျိုးဆက် စီးပွားရေး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများမှ...
ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှအတွက် ကိုဗစ်နိုင်တင်းအလွန် စီးပွားရေး နာလန်ထူနိုင်ရန် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု မြှင့်တင်ပေးခြင်းက အခရာကျ - အေဒီဘီ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (ကိုဗစ်နိုင်တင်း) ကပ်ဘေးမှ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသနာလန်ထူနိုင်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အာလုံးလွှမ်းခြုံပါဝင်သည့် ကြံ့ခိုင်ကောင်းမွန်မှု ကူညီအားဖြည့်ပေးနိုင်သော မူဝါဒများက အခရာကျကြောင်း အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) ၏...
17 May 2022 | Blog Entry